Flodeal Inc မှ. အိန္ဒိယကနေသဘာဝကျောက်ခဲတစ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့ဖြစ်ပါသည်. Flodeal မှာ, အဲဒီလိုကျောက်အဖြစ်လှပသောရှုထောင်ကျောက်ခဲတို့ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ, စကငျြကြောကျ, သဲကျောက်များနှင့် slate သောကျောက်. Flodeal အရည်အသွေးမြင့်စကျင်ကျောက်အောင် Udaipur နှင့်ဘန်ဂလိုတွင်တည်ရှိသည်အနုပညာစက်ရုံ၏ပြည်နယ်ရှိပါတယ်, ကျောက်နှင့်သဲကျောက်ပြားနှင့်အုပ်ကြွပ်.
ကျနော်တို့အထူးပြောနေတာကျောက်ခဲတို့ကိုလုပ်စက်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြ. ကျောက်နှင့်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းထိုကဲ့သို့သောကျောက်များ၏ဂုဏ်အသရေကိုတိုးမြှင့်ဖို့တိနှင့်အတူဖြတ်နေကြတယ်. ကျနော်တို့ေူပာင်းလဲပုံဥပမာနှင့်ဒီဇိုင်း၏တန်ခိုးတော်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးရိုးရှင်းဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အတွက်အမှန်တကယ်ယုံကြည်, အတွေ့အကြုံများခြီးမွှော, နေရာတိုင်းကလူထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လာအောင်နှိုးဆွ.
ကောင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်ကောင်းသောဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းထံမှလာ. ကျနော်တို့ကအမြင်အာရုံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုစတင်နိုင်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေ, သငျသညျအကွောငျးကိုသငျယူဖို့, နှင့်အတူတကွလှပသောအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်.
ကျနော်တို့ကို Rajasthan ပြည်နယ်၏ Rajnagar ဧရိယာထဲမှာအဖြူရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း၏ကျောက်မိုင်း operate, အရာဖြစ်ပါသည် 60 ဝေး Udaipur စီးတီးထံမှ KM. အဖြူရောင်စကျင်ကျောက်ထိုကဲ့သို့သောအမေရိကန်စသောနိုင်ငံများသို့တင်ပို့နေသည်, ကနေဒါ, ဗြိတိန်နိုင်ငံ, အယ်လ်ဂျီးရီးယား, လစ်ဗျား, မော်ရိုကို, အင်ဒိုနီးရှားစသည်တို့ကို.
ကျနော်တို့ Udaipur အတွက်အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းကျောက်မိုင်း operate. အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်အိန္ဒိယတွင်အကျော်ကြားဆုံးဂေါ်လီလုံးတစျခုဖွစျသညျ. အဆိုပါကျောက်မိုင်းထိုကဲ့သို့သောသစ်တောစိမ်းလန်းစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းအဖြစ်အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်အမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်, လွင်ပြင်အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်, ပင့်ကူအစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်.
ကျနော်တို့ Udaipur ဧရိယာ၌ကျင်ကျောက်နှင့်ကျောက်၏ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပိုလန်အထူးပြုစက်ရုံတစ်ရုံကို run. ပျမ်းမျှထုတ်လုပ်မှုဖြစ်ပါသည် 12000 စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း၏တစ်စတုရန်းမီတာနှင့် 12000 ကျောက်၏စတုရန်းမီတာ. ကျနော်တို့ဘန်ဂလိုများတွင် Absolute က Black ကျောက်၏ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပိုလန်အထူးပြုစက်ရုံတစ်ရုံကို run. ကျနော်တို့ပြားနှင့် Absolute က Black ကျောက်များနှင့်ဘဟားမားအပြာရောင်ကျောက်၏ headstone အောင်. ပျမ်းမျှထုတ်လုပ်မှုဖြစ်ပါသည် 1600 Absolute က Black ကျောက်၏တစ်စတုရန်းမီတာနှင့် 1500 တစ်လလျှင်ဘဟားမားအပြာရောင်၏တစ်စတုရန်းမီတာ.
ကျနော်တို့ Ongole အတွက်အနက်ရောင်က Galaxy ကျောက်၏ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အထူးပြုစက်ရုံ run. Black ကက Galaxy ကျောက်၏ပြားနှင့်အုပ်ကြွပ်ကဒီမှာလုပ်နေကြတယ်. ပစ္စည်း၏ပျမ်းမျှထုတ်လုပ်မှုဖြစ်ပါသည် 12000 ပြား၏တစ်စတုရန်းမီတာနှင့် 7000 ကျောက်အုပ်ကြွပ်၏စတုရန်းမီတာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွေက ISO များမှာ 9001:2008 certified ရရှိထားပြီး. ကျနော်တို့အစိုးရပို့ကုန်အိမ်နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုယူနစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်.